Ofufe Chineke Na-anakwere - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
6Ozizi ndị ohu Chineke na-adabere na Bible. Bible n’onwe ya na-ekwu, sị: “Akwụkwọ Nsọ dum sitere n’ike mmụọ nsọ Chineke, baakwa uru maka izi ihe, maka ịdọ aka ná ntị, maka ime ka ihe guzozie, maka inye ọzụzụ n’ezi omume, ka onye nke Chineke wee ruo eru n’ụzọ zuru ezu, bụrụ onye a kwadebere n’ụzọ zuru ezu maka ezi ọrụ ọ bụla.” (2 Timoti 3:16, 17) Pọl onyeozi degaara Ndị Kraịst ibe ya akwụkwọ, sị: “Mgbe unu natara okwu Chineke, bụ́ nke unu nụrụ n’ọnụ anyị, unu nakweere ya, ọ bụghị dị ka okwu ụmụ mmadụ, kama, dị nnọọ ka ọ bụ n’eziokwu, dị ka okwu Chineke.” (1 Ndị Tesalonaịka 2:13) N’ihi ya, nkwenkwe na ihe omume nke ezi okpukpe adịghị adabere n’echiche ma ọ bụ n’omenala mmadụ. Ha na-adabere n’Okwu Chineke e dere n’ike mmụọ nsọ, bụ́ Bible.
8Ndị na-ekpe ezi okpukpe ahụ na-efe nanị Jehova, ha na-emekwa ka a mara aha ya. Jizọs kwuru, sị: “Ọ bụ Jehova bụ́ Chineke gị ka ị na-aghaghị ife ofufe, ọ bụkwa nanị ya ka ị na-aghaghị ijere ozi dị nsọ.” (Matiu 4:10) N’ihi ya, ọ dịghị onye ọzọ ndị ohu Chineke na-efe ma ọ bụghị Jehova. Ofufe a na-agụnye ime ka ndị mmadụ mara aha ezi Chineke ahụ nakwa ụdị onye ọ bụ. Abụ Ọma 83:18 na-ekwu, sị: “Gị onwe gị, Onye aha Gị bụ Jehova, nanị Gị, bụ Onye kachasị ihe nile elu n’elu ụwa nile.” Jizọs setịpụrụ ihe nlereanya n’inyere ndị ọzọ aka ịmata Chineke, dị ka o kwuru n’ekpere, sị: “Emewo m ka aha gị pụta ìhè nye ndị i sitere n’ụwa nye m.” (Jọn 17:6) N’otu aka ahụ, ndị na-efe ezi ofufe taa na-akụziri ndị ọzọ banyere aha Chineke, nzube ya, na àgwà ya.
9Ndị Chineke na-egosipụta ezi ịhụnanya sitere n’obi n’ebe ibe ha nọ. Jizọs kwuru, sị: “Mmadụ nile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.” (Jọn 13:35) Ndị Kraịst oge mbụ nwere ịhụnanya dị otú ahụ n’ebe ibe ha nọ. Ndịrịta iche nke agbụrụ, ọkwá, na mba, adịghị egbochi ụdị ịhụnanya Chineke na-achọ, ọ na-emekwa ka ụmụ mmadụ ghọọ ezi òtù ụmụnna a na-apụghị ikewa ekewa. (Ndị Kọlọsi 3:14) Ndị na-ekpe okpukpe ụgha enweghị òtù ụmụnna dị otú ahụ na-ahụ n’anya. Olee otú anyị si mara? Ha na-egburịta ibe ha n’ihi esemokwu mba na mba ma ọ bụ nke agbụrụ na agbụrụ. Ezi Ndị Kraịst adịghị ebuli ngwá agha igbu ụmụnna ha ma ọ bụ ndị ọ bụla ọzọ. Bible na-ekwu, sị: “Ụmụ Chineke na ụmụ Ekwensu pụtara ìhè site n’eziokwu a: Onye ọ bụla nke na-adịghị anọgide na-eme ezi omume esiteghị na Chineke, otú ahụ ka ọ dịkwa onye na-adịghị ahụ nwanna ya n’anya…. Anyị kwesịrị inwe ịhụnanya maka ibe anyị; ọ bụghị dị ka Ken, onye sitere n’ajọ onye ahụ ma gbuo nwanne ya.”—1 Jọn 3:10-12; 4:20, 21.
11Ezi Ndị Kraịst na-anakwere Jizọs Kraịst dị ka onye Chineke na-esi n’aka ya azọpụta anyị. Bible na-ekwu, sị: “Nzọpụta adịghị n’onye ọ bụla ọzọ, n’ihi na aha ọzọ adịghị n’okpuru eluigwe nke e nyeworo n’etiti ụmụ mmadụ bụ́ nke a na-aghaghị isi na ya zọpụta anyị.” (Ọrụ 4:12) Dị ka anyị hụrụ n’Isi nke 5 n’akwụkwọ a, Jizọs nyere ndụ ya dị ka ihe mgbapụta maka ụmụ mmadụ na-erube isi. (Matiu 20:28) Ọzọkwa, Jizọs bụ Eze Chineke họpụtara n’Alaeze eluigwe nke ga-achị ụwa dum. Chineke chọkwara ka anyị na-erubere Jizọs isi ma na-etinye ihe ndị ọ kụziri n’ọrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ndụ ebighị ebi. Ọ bụ ya mere Bible ji na-ekwu, sị: “Onye na-egosipụta okwukwe n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi; onye na-enupụrụ Ọkpara ahụ isi agaghị ahụ ndụ.”—Jọn 3:36.
12Ndị na-efe ezi ofufe abụghị akụkụ nke ụwa. Mgbe a na-ekpe ya ikpe n’ihu onye ọchịchị Rom bụ́ Paịlet, Jizọs kwuru, sị: “Alaeze m abụghị akụkụ nke ụwa a.” (Jọn 18:36) N’agbanyeghị mba ha bi na ya, ezi ụmụazụ Jizọs bụ ndị Alaeze eluigwe na-achị, n’ihi ya kwa, ha adịghị etinye aka n’ụzọ ọ bụla na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa. Ha adịghị esonye n’esemokwu ya. Otú ọ dị, ndị na-efe Jehova adịghị egbochi ndị ọzọ ime ihe ha chọrọ ime n’ihe banyere iso n’òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ịzọ ọkwá ọchịchị, ma ọ bụ ịtụ vootu. N’agbanyeghị na ezi ndị na-efe Chineke ofufe na-anọpụ iche n’ihe banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha na-erube isi n’iwu. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na Okwu Chineke nyere ha iwu ka ha ‘doo onwe ha n’okpuru’ “ikike ndị ka elu” nke ọchịchị. (Ndị Rom 13:1) Ọ bụrụ na ihe ọchịchị chọrọ emegide ihe Chineke chọrọ, ndị na-efe ezi ofufe na-agbaso ihe nlereanya nke ndịozi, bụ́ ndị sịrị: “Anyị aghaghị irubere Chineke isi dị ka onye na-achị achị karịa mmadụ.”—Ọrụ 5:29; Mak 12:17.
13Ezi ụmụazụ Jizọs na-ekwusa na Alaeze Chineke bụ nanị olileanya dịịrị ihe a kpọrọ mmadụ. Jizọs buru amụma, sị: “A ga-ekwusakwa ozi ọma nke a nke alaeze n’elu ụwa dum mmadụ bi ka ọ bụrụ àmà nye mba nile; mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga-abịa.” (Matiu 24:14) Ezi ụmụazụ Jizọs Kraịst na-akpọsa Alaeze eluigwe Chineke dị ka nanị olileanya dịịrị ihe a kpọrọ mmadụ kama ịgba ndị mmadụ ume ilegara ndị ọchịchị bụ́ mmadụ anya maka igbo mkpa ha. (Abụ Ọma 146:3) Jizọs kụziiri anyị ikpe ekpere maka ọchịchị ahụ zuru okè mgbe ọ sịrị: “Ka alaeze gị bịa. Ka uche gị meekwa n’ụwa, dị ka ọ na-eme n’eluigwe.” (Matiu 6:10) Okwu Chineke buru amụma na Alaeze eluigwe a “ga-etipịa alaeze ndị a nile [dị ugbu a] mee ka ha gwụsịa, ma ya onwe ya ga-eguzosi ike ruo mgbe ebighị ebi.”—Daniel 2:44.
16 Pọl onyeozi gosiri na anyị ekwesịghị ikere òkè n’ofufe ụgha. O dere, sị: “ ‘Ya mere sinụ n’etiti ha pụọ, kewapụkwanụ onwe unu,’ ka Jehova na-asị, ‘kwụsịkwanụ ibitụ ihe na-adịghị ọcha aka’; ‘m ga-anabatakwa unu.’ ” (2 Ndị Kọrint 6:17; Aịsaịa 52:11) Ya mere, ezi Ndị Kraịst na-ezere ihe ọ bụla metụtara ofufe ụgha.
17 Bible na-egosi na ụdị okpukpe ụgha nile bụ akụkụ nke “Babilọn Ukwu ahụ.”* (Mkpughe 17:5) Aha ahụ na-echetara anyị obodo ochie bụ́ Babilọn, bụ́ ebe okpukpe ụgha malitere mgbe Iju Mmiri nke ụbọchị Noa gasịrị. Ọtụtụ ozizi nke okpukpe ụgha nakwa ememe ndị ha na-emekarị ugbu a malitere ogologo oge gara aga na Babilọn. Dị ka ihe atụ, ndị Babilọn fere chi atọ n’ime otu. Taa, ozizi bụ́ isi nke ọtụtụ okpukpe bụ Atọ n’Ime Otu. Ma Bible na-akụzi n’ụzọ doro anya na e nwere nanị otu ezi Chineke, bụ́ Jehova, nakwa na Jizọs Kraịst bụ Ọkpara ya. (Jọn 17:3) Ndị Babilọn kwekwaara na mmadụ nwere mkpụrụ obi na-adịghị anwụ anwụ, bụ́ nke na-adịgide ndụ mgbe mmadụ nwụsịrị, nke pụkwara ịta ahụhụ n’ebe a na-emekpa mmadụ ahụ́. Taa, ihe ka n’ọtụtụ okpukpe na-akụzi nkwenkwe bụ́ na a pụrụ imekpa mkpụrụ obi na-adịghị anwụ anwụ, ma ọ bụ mmụọ, ahụ́ n’ọkụ ala mmụọ.
* Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere otú Babilọn Ukwu ahụ si nọchie anya alaeze ụwa nke okpukpe ụgha, lee Ihe Odide Ntụkwasị.